Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်)
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
• သွေးခဲခြင်းကို ကုသရန် နှင့် ကာကွယ်ရန်။
• Atrial fibrillation (နှလုံးခုန်ရာတွင် စည်းချက်မမှန်သောရောဂါ) ရှိသူများတွင် လေဖြတ်ခြင်း နှင့် ပြင်းထန်သော သွေးခဲခြင်းကို လျှော့ချရန်။
• ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း (Deep Vein Thrombosis)ကို ကာကွယ်ကုသရန်။
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Rivaroxaban ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သောက်နိုင်သည်။ သင်သည် Rivaroxaban ဆေးပြားပုံစံသောက်သုံးသူဖြစ်ပါက ဆေးပြားတပြားလုံးကို မြိုချပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ကောင်းသွားပြီဟု ထင်မှတ်စေကာမူ ဆေးကို မှန်မှန်ဆက်သောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် မတိုင်ပင်ဘဲ ဆေးသောက်ခြင်းကို မိမိသဘောဖြင့် ရပ်လိုက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ လိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိရန် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Rivaroxaban ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ rivaroxaban ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ rivaroxaban ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Rivaroxaban ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Rivaroxaban ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်တွင်အောက်ပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
• ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးနို့ တိုက်နေခြင်း။
• ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်လိုသည့် ဆေး/မလိုသည့် ဆေးတမျိုးမျိုး သောက်နေခြင်း။ ဥပမာ။ ။ amiodarone,azithromycin, chloramphenicol, cimetidine,diltiazem,dronedarone,erythromycin, felodipine, quinidine, ranolazine, or verapamil; abciximab,alteplase , other anticoagulants (for example, enoxaparin, heparin, warfarin),
aspirin, bivalirudin, dabigatran, desirudin, eptifibatide, NSAIDs (for example,
ibuprofen, ketorolac), platelet inhibitors (for example, clopidogrel, prasugrel,ticlopidine), or tirofiban.
• သဘာဝအားဖြည့်ဆေး သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာများ စားနေခြင်း။
• ဆေး၊အစားအစာ တခုခု သို့မဟုတ် အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
• သွေးရောဂါတခုခုရှိခြင်း၊သွေးတိုးရှိခြင်း၊သွေးကြောပြဿနာများရှိခြင်း၊သွေးအားနည်းခြင်း နှင့် အခြားသွေးနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများ၊သွေးတွင်း platelet ပမာဏ နည်းပါးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားplatelet ပြဿနာများရှိခြင်း၊ အသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ပြဿနာများရှိခြင်း။
• လေဖြတ်ဖူးခြင်း (အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၆လအတွင်း)
• အစာအိမ်အနာ လက်ရှိဖြစ်နေခြင်း၊ဖြစ်ဖူးခြင်း၊ အခြားသော မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့် ရောဂါများရှိခြင်း။
• ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ ရှိခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Rivaroxaban သည်အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
• နောက်ကျောနာခြင်း၊သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း၊ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်း၊ဆီးဝမ်းမမှန်ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊အပူလောင်သလို ခံစားရခြင်း၊ထုံကျင်ခြင်း၊အပ်စူးသလို တဆစ်ဆစ်နာနေခြင်း၊ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊မြိုချရခက်ခြင်း၊မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မိန်းမကိုယ်မှ သွေးယိုစီးခြင်း၊ဓမ္မတာ များခြင်း၊ခြေထောက်များ မသယ်ချင်ခြင်း၊နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ထိခိုက်မိလျှင် အချိန်အတော်ကြာထိ သွေးမတိတ်ခြင်း၊ဝမ်းမည်းမည်းများသွားခြင်း၊ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊သွေးအန်ခြင်း၊ကော်ဖီအနှစ်ရောင်များ အန်ခြင်း။ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ပိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။
• သတိလစ်ခြင်း၊လက်ခြေတို့ နာကျင်ခြင်း၊အနာမှ အရည်များထွက်ခြင်း။ ၎င်းတို့မှာ ဖြစ်ပွားလေ့ သိပ်မရှိလှ။
• ဆီးကျင်ခြင်း၊ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ဆီးသွားလျှင်နာခြင်း။ ဤ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အလွန်ရှားပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rivaroxaban ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Rivaroxaban နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Abciximab; Aceclofenac; Acemetacin;
Acenocoumarol; Alipogene Tiparvovec; Alteplase, Recombinant; Amtolmetin
Guacil; Anagrelide; Anistreplase; Apixaban; Argatroban; Aspirin; Bivalirudin;
Boceprevir; Bromfenac; Bufexamac; Carbamazepine; Celecoxib; Choline
Salicylate; Cilostazol; Clonixin; Clopidogrel; Cobicistat; Collagenase, Clostridium
histolyticum; Conivaptan; Dabigatran Etexilate; Dalteparin; Danaparoid;
Darunavir; Desirudin; Dexamethasone; Dexibuprofen; Dexketoprofen;
Diclofenac; Diflunisal; Dipyridamole; Dipyrone; Drotrecogin Alfa; Droxicam;
Edoxaban; Eliglustat; Enoxaparin; Eptifibatide; Etodolac; Etofenamate;
Etoricoxib; Felbinac; Fenofibrate; Fenofibric Acid; Fenoprofen; Fepradinol;
Feprazone; Floctafenine; Flufenamic Acid; Fluoxetine; Flurbiprofen;
Fondaparinux; Fosphenytoin; Heparin; Ibuprofen; Ibuprofen Lysine; Iloprost;
Indinavir; Indomethacin; Itraconazole; Ketoconazole; Ketoprofen; Ketorolac;
Lepirudin; Levomilnacipran; Lomitapide; Lopinavir; Lornoxicam; Loxoprofen;
Lumiracoxib; Meclofenamate; Mefenamic Acid; Meloxicam; Morniflumate;
Nabumetone; Naproxen; Nelfinavir; Nepafenac; Niflumic Acid; Nilotinib;
Nimesulide; Nintedanib; Oxaprozin; Oxyphenbutazone; Parecoxib; Pentosan
Polysulfate Sodium; Phenindione; Phenobarbital; Phenprocoumon;
Phenylbutazone; Phenytoin; Piketoprofen; Piroxicam; Posaconazole; Prasugrel;
Primidone; Proglumetacin; Propionic Acid; Propyphenazone; Proquazone;
Protein C; Reteplase, Recombinant; Rifampin; Rifapentine; Ritonavir; Rofecoxib;
Salicylic Acid; Salsalate; Saquinavir; Simeprevir; Sodium Salicylate; St John’s
Wort; Streptokinase; Sulfinpyrazone; Sulindac; Telaprevir; Tenecteplase;
Tenoxicam; Tiaprofenic Acid; Ticlopidine; Tinzaparin; Tipranavir; Tirofiban;
Tocophersolan; Tolfenamic Acid; Tolmetin; Treprostinil; Urokinase; Valdecoxib;
Venlafaxine; Vilazodone; Vorapaxar; Voriconazole; Vortioxetine; Warfarin.
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် Rivaroxaban ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rivaroxaban ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးထွက်ခြင်းများ
• ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးထဲ ပိုက်ထည့်ထားခြင်း
• သာမန်အဆင့်မှ ပြင်းထန်သော အသည်းရောဂါ
• အစာအိမ်၊အူတို့တွင် အနာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုအနာမှ သွေးထွက်ခြင်း
• မကြာသေးမီက လေဖြတ်ဖူးခြင်း
• (မျက်လုံး၊ဦးနှောက်၊ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး စသည်) ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖူးခြင်း
• လက်ရှိ သွေးအကြီးအကျယ်ထွက်နေခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ rivaroxaban ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ပေါင်ရိုးအစားထိုးခွဲစိတ်ပြီး နောက်ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်
—->၁၀မီလီဂရမ် တနေ့လျင်တကြိမ်ကို ၃၅ရက်တိတိ သောက်ရမည်။ ခွဲစိတ်ပြီး အနည်းဆုံး ၆နာရီမှ ၁၀နာရီအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဆေးကို သောက်ရမည်။
ဒူးရိုးအစားထိုးခွဲစိတ်ပြီး နောက်ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်
—->၁၀မီလီဂရမ် တနေ့လျင်တကြိမ်ကို ၁၂ရက်တိတိ သောက်ရမည်။ ခွဲစိတ်ပြီး အနည်းဆုံး ၆နာရီမှ ၁၀နာရီအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဆေးကို သောက်ရမည်။
ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့် အဆုတ်သွေးကြောထဲ သွေးခဲပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်
—->၂၀ မီလီဂရမ် ကို တနေ့လျင် ၁ကြိမ် အစာနှင့် နီးနီး သောက်ရမည်။
atrial fibrillation ရောဂါသည်များတွင် သွေးခဲခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်
—->၁၅ မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် ၂၀မီလီဂရမ် ကို တနေ့လျှင် တကြိမ် ညနေစာစားပြီးနောက် သောက်ရမည်။
ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း နှင့် အဆုတ်သွေးကြောထဲ သွေးခဲပိတ်ခြင်းကို ကုသရန်
—->ပထမ ၂၁ရက် ——> ၁၅ မီလီဂရမ် တနေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ကို အစာနှင့် နီးနီးသောက်ရမည်။ ထို့နောက် ၂၀မီလီဂရမ် တနေ့လျှင်တကြိမ်ကို သောက်နေကျအချိန်အတိုင်း အစားနှင့် နီးကပ်စွာ သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ rivaroxaban ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Rivaroxaban (ရီဗာရိုဇာဗန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
rivaroxaban ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား : ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၀ မီလီဂရမ်
Rivaroxaban ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Rivaroxaban. https://www.drugs.com/cdi/rivaroxaban.html. Accessed July 18,2016.
Rivaroxaban. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/rivaroxaban- oral-route/description/drg-20075013. Accessed July 18, 2016.
Rivaroxaban. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-156263/rivaroxaban-oral/details. Accessed July 18, 2016.